Weah anoda kujoina Neymar neMbappe muboka re PSG - TELES RELAY
HOME » SPORTS Weah anoda kujoina Neymar naMbappe muboka re PSG
Timothy Weah kubva kuParis Saint-Germain akati aida kugara nevatungamiriri veFrance mushure mokunge vadzoka kubva kuchikwereti kuCelt.
American international Weah, uyo akapedza hafu yepiri kuparidzira muScotland, vakaudza RMC kuti aida kurova pamwe chete Neymar kubva Kylian Mbappe et Edinson Cavani .  "Ndinofanira kudzokera kune PSG uye ndinovimba kuti ndinokwanisa kuita zvose izvo vadzidzisi nevatambi vanoda ini," akadaro mutambi, ane makore anopfuura 19. "Chido changu chagara chiri chekutamba PSG.
"Kuuya kubva kuchikoro, chaiva kurota kwangu. Ndagara ndichirota kuti ndive pane izvi, ndichitamba nekambani yepamusoro yevatambi nevatambi vatsva, uye izvo zvicharamba zviri chinangwa changu.
"Ndinoda chikwata uye ndave ndiripo kwemakore mana. makore - sei usingaiti zvakawanda? "
Sources akaudzwa ESPN FC PSG inoteerera kugovera kweWeah muzhizha asi haingatsvaki kuitengesa.
Iye ari pasi pesangano re 2021, uye zvinyorwa zvakati Strasbourg yakamutsazve chido chavo kubvira munguva yekupedzisira yechando apo paiva nevamwe vaipikisa muChnumX League ne Premier League.
Weah, uyo akawana zvinangwa zvina mu 16 mitambo yeCeltic, akati zvaive zvakakosha kusiya "nzvimbo yake yekunyaradza" nokuenda kuGlasgow.
"Zvaive zvakaoma," akadaro. "Kuva pa PSG, munhu wese anoziva zita rangu rokupedzisira nababa vangu [George Weah] saka zvakanga zvakaoma.
"Ndinofunga kuti zvinonyanya kukosha kuti vateereri vabuda munzvimbo yavo yekunyaradza kubva paudiki uye vachiona nzvimbo yakasiyana -Scotland yakanga isiri iyo. "
Weah akati aida kuva zita guru muAmerica yebhola, asi akawedzera, "Ndiyo 50-50. America ichokwadi chaizvo uye kuva nyeredzi munyika ino, unofanira kuita zvakawanda.
"Iwe unofanirwa kuisa zvinangwa, unofanira kushanda. Ndinofunga kuti ndiri kuenda ikoko. Vafaki, vanondida, uye vanodikanwa kana ndiri pasi. Ndinofarira kutamba navo uye ndinoda kutamba nyika yangu. Ndiyo kukudzwa kwakakwana.
"Ndinonzwa sokuti, mune imwe nguva, ini ndichava mutambi mukuru." 
Nyaya iyi yakatanga kutanga (muChirungu) http://espn.com/soccer/paris-saint-germain/story/3855848/weah-wants-to-join-neymar-mbappe-in-psg-team